चौरजहारी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय | चौरजहारी नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय, रुकुम (पश्चिम), कर्णाली प्रदेश, नेपाल
मनोनयन पत्र दर्ता भएका उम्मेदवारको नामावली प्रकाशन सम्वन्धी सूचना
राजिनामा स्वीकृत गरिएको सम्वन्धमा
व्यक्तिगत घटना दर्ता सप्ताह सम्वन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
कार्यपालिका सदस्य सबै बैठकमा उपस्थित हुने सम्वन्धमा
रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता सम्वन्धमा
SEE TEST परिक्षा सम्वन्धमा
अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवस मनाउने सम्वन्धमा
माध्यामिक तह (९-१०) स्तरीय हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता सम्बन्धी सूचना
Home » परिचय » चौरजहारी नगरपालिकाको संक्षिप्त परिचय
हिमाल पहाड र तराईको झल्को दने चौरजहारी नगरपालिका सुन्दर प्रकृतिको काखमा अवस्थित छ। नेपालको कर्णालीप्रदेश रुकुम पश्चिमदेखि १६ कोष पश्चिम दक्षिणमा पर्ने चौरजहारी नगरपालिकामा समथर उपत्यका, टाकुरा र अग्ला चुचुराहरु छन् । स्थानीय भाषामा समथर भू-भागलाई चौर भनिन्छ । भेरी नदिको कनारमा समथर चौर रहेको र त्यसमा करौंती, चिमेली, दाँते लगायत जातका झाडीहरु रहेकोले चौर+झारी शब्दको संयोजन गरी विगतमा चौरझारी भन्ने गरेको पाइछ । चौरझारी शब्दको अपभ्रंश हुँदै जाँदा त्यस ठाउँको नाम चौरजहारी हुन गएको भनाई छ।
२०७२ असोज १ गते तत्कलिन विजयश्वरी र कोटजहारी गा.वि.स.को समायोजन गरी चौरजहारी नगरपालिका घोषणा गरिएको थियो । मन्त्रीपरिषद्को मिति २०७३ फागुन २२ गतेको निर्णयपछि २०७३ फागुन २७ गते स्थानीय तहको नयाँ संरचना बन्यो । स्थानीय तहको संरचना निर्माणका क्रममा रुकुमका तत्कालिन चौरजहारी नगरपालिकाका, खोलागाउँका साथै नुवाकोट र पूर्तिमकाँडाका केही वडाहलाई एक ठाउँमा गाभियो । जसको नामाकरण पुन: चौरजहारी नगरपालिका भयो । सल्यान दार्माकोट भएर साविकका नुवाकोट, खोलागाउँ र पूर्तिमकाँडा हुँदै बग्ने जहारीखोला रहेको छ । नगरपालिकाको सबै भू-भाग समेटेर यो जहारीखोला बग्ने गरेको छ । जहारीखोला बग्ने जहारी क्षेत्र र समथर भू-भाग चौरलाई संयोजन गर्दा चौरजहारी शब्द निर्माण हुने भएकोले नगरपालिकाको नाम चौरजहारी नै नामाकरण गर्न उचित ठहर गरिएको थियो । यसैको परिणाम स्वरुप थप भू-भागसहित स्थानीय तहको नयाँ संरचनाका क्रममा पनि चौरजहारी नगरपालिकाको नामले निरन्तरता पायो ।
चौरजहारी नगरपालिकाको सीमाना पूर्वमा त्रिवेणी गाउँपालिका पश्चिममा जाजरकोटको भेरी नगरपालिका पर्दछ । त्यसैगरी उत्तरमा सानीभरी गाउँपालिका र दक्षिणमा सल्यानको कुमाख गाउँपालिका रहेको छ । समुन्द्र सतहदेखि ६ सय ६७ मिटर उचाइ भएको बाँसखोलास्थित भेरी नदी नगरपालिकाको सबैभन्दा होचो स्थान हो । वडा नम्बर ४ को मालिका लेक, वडा नम्बर ६ को खागल, वडा नम्बर १४ को दयालेक यस नगरपालिकाका अग्ला स्थानहरु हुन् जो १ हजार ५ सय १२ मिटरभन्दा बढि उचाईमा रहेका छन् ।
२०७२ अघिका तत्कालिन गा.वि.स.हरु विजयश्वरी, कोटजहारी, खोलागाउँ त्यसैगरी पूर्तिमकाँडा गा.वि.स.का ४, ५ र ९ र नुवाकोट गा.वि.स.का १, २, ४, ५, ६, ७, ८ र ९ नम्बर वडा यस नगरपालिकामा गाभिएका छन् । चौरजहारी नगरपालिकाको क्षेत्रफल १०७.३८ वर्गकिलोमिटर छ भने २०६८ को जनगणनानुसार २७ हजार ४ सय ३८ जनसंख्या रहेको छ । विजयश्वरीडाँडा केन्द्र तोकिएको यस नगरपालिकालाई १४ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । चौरजहारी पुरानो बजार, नयाँ बजार, विजयश्वरी, मेलैनाउली, नार्जि, शान्तिबजार, चन्द्रबजार, चौफा बजार, खारैरह, सिलिङ्गी आदि यस नगरपालिकाका मुख्य व्यापारिक केन्द्रहरु हुन् ।
यस नगरपालिकामा उपत्यका, टाकुरा र अग्ला लेकहरु पनि रहेका छन् । वडा नम्बर १, २ र ३ मा समथर भू- भाग रहेको छ । चौरजहारी नगरपालिकाका लामिछानेगाउँ, नाखिरा, घारीगाउँ, नयाँ बजार, टाटागाउँ, स्यालखोला आदि समथर भु-भाग हुन् । जसमा चौरजहारी उपत्यका रहेको छ । वडा नम्बर १३, ११, १०, ६, ५, ७, ४, ८ र ३ नम्बर वडाको बेसी भएर जहारीखोला बग्दै भेरी नदिमा गएर मिसिन्छ । जहारीखोलाको आसपासमा अंगेरी, मेलैनाउली, नार्जि, थापाचौर, डाब, धुलेखेत, चिसापानी, घुघुतीज्यूला लगायतका फाँटहरु रहेका छन् । जो कृषिका लागि उपयोगी समेत छन् । अमलाटाकुरा, मालिका, कोटजहारी, गडीलेक, मालिका, न्याउली बजार, खागल, जुम्ली पोखरी, खोलागाउँ, दयालेक आदि अग्ला भू-भाग हुन् । यी भू-भागहरु १२ सयदेखि १६ सय मिटरसम्म अग्ला रहेका छन् । यी अग्ला भागहरुमा कहिलेकाही हिउँसमेत पर्दछ ।
आफ्नै भौगोलिक धार्मिक, ऐतिहासिक, राजनैतिक र सामाजिक महत्व र विशेषता यस नगरपालिकाको छ । यहाँ व्राहमण, क्षेत्री, दलित, जनजाति, अपसंख्यक लगायतको मिश्रित बसोबास छ ।व्राहमण, क्षेत्री, दलित र जनजाति अन्तर्गतका ठकुरी, मगर, कामी, दमाई, कुमाल, बादी, बटाला, बस्नेत, खत्री, भण्डार, ओली, गरी, वनगोसाइँ, विष्ट, पुन, घर्ति, थापा यहाँका जातजातीहरु हुन् ।
धार्मिक तथा साँकृतिक, कृषि र शैक्षिक पर्यटनका लागि चौरजहारी नगरपालिका आकर्षक गन्तव्यका रुपमा रहेको छ । वडा नम्बर २ मा रहेको विजयश्वरी भगवती मन्दिर रहेको छ । यो मन्दिरमा पूजा गरे मनोकाङ्कक्षा पूरा हुने धार्मिक विश्वास रहेको छ । वडा नम्बर ४ मा रहेको यो मन्दिर सबैभन्दा उचाइमा रहेको छ । यो मन्दिरमा गई दर्शन गरेमा मनोकाङ्कक्षा पूरा हुने, पानी नपरेमा बोका चढाए पानी पर्ने विश्वास गरिन्छ । विभिन्न हिमशृङ्खलाको तथा रुकुम (पश्चिम) का साथै सल्यान र जाजरकोटका विभिन्न ठाउँको अवलोकन समेत गर्न सकिन्छ ।
यस्तै चौरजहारी नगरपालिकाको वडा नं. ९ गुर्तालगाउँमा रहेको तिर हान्ने ढुंगा पनि निकै रमणीय ठाउँमा रहेको छ । जाजरकोट सदरमुकाम नियाल्न सकिने तथा भेरी नदिको अवलोकन गर्न सकिने यो स्थलमा कलात्मक ढुङ्गाहरु रहेका छन् । जुन बाईसे चौविसे राज्यका बेला जाजरकोटका राजाले रुकुमका राजालाई ढुंगा प्रहार गरेको थियो रे ! त्यही ढुंगा आजभोली पनि देख्न सकिन्छ । यस्तै मनकोटडाँडा पनि ऐतिहासिक डाँडाको रुपमा रहेको छ । यो डाडाँ हुँदै सिधै गयो भने काठमाडौंको नागढुंगा पुग्न सकिने बुढापाखाहरुको भनाई छ ।
वडा नम्बर २ को देवल र वायुघट्ट पनि रहेको छ । जाजरकोटका तत्कालिन राजा जगतिसेनबाट पत्थरमा कलात्मक रुपमा बिचबिचमा नक्सा हालेर निर्मित देवल र यसभित्र रहेको वायुघट्ट निकै कलात्मक र ऐतिहासिक रहेको छ ।
चौरजहारी नगरवासीहरुका लागि दशैं, तिहार, माघे सक्रान्ति चैते देशैं, असारे सङ्क्रान्ति, श्रीकृष्ण जन्माष्ठमी, तीज आदि चाडपर्वहरु हुन् । शंखपीपल, पाँच पूर्णिमा, भदौ १२ र २०, चौफा, सताइस, औसी, भैली मेला, दह पोखरा, कोटै र ढकै मेला यहाँका मुख्य जात्रा तथा मेलाहरु हुन् ।
विभिन्न जातजातिहरुबीचको सामाजिक, साँकृतिक र धार्मिक सहिष्णुता, सद्भाव, सहकार्य र एकता यस नगरपालिकाको मुख्य विशेषता हो । विविध संस्कृतले भरिपुर्ण छ यो नगरपालिका । सोरठी, सिगारु, पैसेरी, तीज, देउसी, भैलो, टप्पा, झ्याउरे आदि नाच विशेष पर्व तथा उत्सवमा मनोरञ्नका लागि नाचिन्छ ।नगरक्षेत्रका सबै समुदायले नाच्ने यो मयुर नाच निकै लोकप्रिय छ । यो नाँच नाँच्दा बासुरी मादल तथा अन्य बाजाँगाजाहरुको प्रयोग समेत गरिन्छ । महिला तथा पुरुषले मिश्रित रुपमा नाच्ने यो नाँच निकै आकर्षक अनि रमाईलो हुन्छ । धार्मिक, साँस्कृतिक एवं पर्यटकीय क्षेत्रहरुको संरक्षण सम्बर्द्धन गर्न नगरपालिकाले प्रोत्साहन गर्दै आएको छ ।
बाघ, बाँदर, स्याल, खरायो, मलस्याब्रो, घोरल, रतुवा आदि यस क्षेत्रमा पाइने वन्यजन्तुहरु हुन् । त्यसैगरी चराचुरुङ्गीहरुमा होलेसा, मलेवा, तित्रा, ढुकुर, कालिज, काग, गिद्ध, सुँगा आदि पाइन्छन् । साल, सल्ला, खयर, सिसौं, बाँझ, साज, भिमल, वर, पीपल, खैरी, कोठीमारो, जामुना आदि यहाँका मुख्य वनस्पतिहरु हुन् ।
प्राकृतिक सुन्दरता, सहरीकरण, कृषि, पशुपालन र मौलिकता संस्कृति चौरजहारी नगरपालिको पहिचान हो। विविधताबीचको एकता यहाँ पाउँन सकिन्छ ।प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, उत्पादन र पर्यटनको समग्ररुप चौरजहारी नगरपालिका हो
"आत्मनिर्भर, एकतावद्ध र समृद्ध नगरको निर्माण: चौरजहारी नगरवासीको पहिचान" भन्ने मुलनारालाई आत्मसात गर्दै यस चौरजहारी नगरपालिका क्षेत्रको समृद्धि, समुन्नति र विकासको लागि नगरपालिका परिवार अगाडि बढिरहेकोछ । क्रमश: शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीलाई प्रमुख प्राथमिकताक्रमका क्षेत्र तोकि सोही अनुरुप बजेट बिनियोजन गरी नगरपालिका विकासको पथमा लम्किरहेको छ
केन्द्रः साबिक विजयश्वरी गा.वि.स. को कार्यालय,
Post date: 03/07/2021 - 13:19
Updated date: Sun, 03/07/2021 - 13:19
Post date: 05/12/2022 - 18:16
Updated date: Thu, 05/12/2022 - 18:16
Post date: 05/12/2022 - 18:14
Updated date: Thu, 05/12/2022 - 18:14
Post date: 02/11/2022 - 13:52
Updated date: Fri, 02/11/2022 - 13:52